Kai Ken inu inharaunda inotyairwa, DeFi chiratidzo. Mukutengeserana kwega kwega, zviitiko zvitatu zvakapusa zvinoitika: Burn, LP Kuwana, uye Kukura kwekukura. Kubudikidza neiyi tokenomics modhi, iyo purojekiti inobatsirwa seyakazara nekutenga kwega kwega. Kai ken transaction inobatsira VABATI vese.
Ichi chiratidzo chine chinangwa chekupa mubayiro varidzi uye chinoranga vanotengesa. Pakutengeserana kwese, mitero inotevera inoshandiswa:
Kana muzvinashawo akatenga chiratidzo panguva Yekutengesa Ruzhinji:
1% inoenda kushambadziro chikwama
1% inoenda kuLP
1% inoenda kunopisa kero yewallet
2% inoenda kune vanobata
Kana muzvinashawo akatengesa chiratidzo panguva yekutengesa kweruzhinji:
2% - 7% inoenda kune vanobata zvichienderana neEti yakaenzana neiyo yese kutengesa mutengesi achaita. Chibvumirano chinogadza iyo yakaenzana Eth uye kubvisa iyo% inoenda kune vanobata.
Iyo 2% - 7% iyo inoenda kune vanobata kune yega yega kutengesa kutengesa chinhu chisina munhu akamboshandisa. Iyi ficha yakasarudzika uye inotanga kuonekwa mune ino chiratidzo.
Zvimiro uye zvigadziriso zvemberi:
Imbwa Farm. Iri richava dziva rekurima reLP. Kaiken INU inogona kuwiriraniswa neEth, USDT uye imwe mari yakagadzikana yekurima yakawanda Kaiken INU. Kaiken INU achabatanawo nemamwe matokeni ekunyepedzera.
Imbwa Imba. Imbwa Imba ichave imwe yakatemwa chiratidzo yekuti painobatanidzwa naKaiken Inu muImbwa Farm, inowedzera simba rekutsika.
Crypto Puppies. Ichi chichava chimwe chiratidzo chinogona kuwanikwa kuburikidza nekuteedzera Kaiken INU nemamwe ma tokeni. Idzi crypto puppies dzinogona kuve NFTs dzinogona kutengeswa
Imbwa Chikafu. Izvi zvichatengwa kudyisa maCrypto Puppies kuitira kuti vakure nekukurumidza.
Imbwa Vitamin. Ichi chichava chimwe chiratidzo chinopa chikafu kuvana ve crypto.
KAI Eco App. Ichi chichava yepamutemo nharembozha yeKaiken Inu chirongwa.
Nhanho Dziri Kutengeswa:
Yakavanzika Kutengesa pamadhora manomwe pa 7 bhiriyoni chiratidzo.
Kutanga-kutengesa pa $ 10 pa 1 bhiriyoni chiratidzo kuburikidza nedxsale.
Veruzhinji Kutengesa pamadhora gumi nemaviri pa12 bhiriyoni chiratidzo
% Kugovera. Izvi zvinongoshanda chete panguva yeruzhinji kutengesa, kwete presale uye yega yekutengesa.
Chinangwa chedu ndechekutora Kishu neShib Inu maererano nevabati uye musika. Tiri kuita nhanho diki.
2021 Q3 1. Kutanga kutora
• Webhusaiti Kugadzira
• Chibvumirano Chekuendesa
• Yemagariro Media Akaunti Kugadzirwa
• Kutengesa Kwega
• Veruzhinji Pre-sale
• CG Kunyorera
• CMC Kushanda
• Kai Eco Wallet Kubudirira
• CEX (1-3 zvinyorwa)
• Imbwa yePurazi Kubudirira
2021 Q4 2. Kudimikira
• Imbwa Farm Kuendeswa
• CEX Chinyorwa (1-2 zvinyorwa)
• Zvemagariro Midhiya Vanokanganisa Kushambadzira
• Imbwa House Kuendeswa
• Gadziridza Kai Eco Wallet
2022 Q1 3. Kukura
• Crypto Puppies Development
• Imbwa Vitamin Kuvandudza
• Imbwa Yekuvandudza Kudya
• CEX Chinyorwa (1 yeiyo yepamusoro 5)
• Gadziridza Kai Wallet
2022 Q2 4. Gungano
Isa zvidimbu zvese munzvimbo dzazvo uye tanga kuvaka iyo KAI Ecosystem.
ICO Yakavanzika Kutengesa
Unoda kunyora yako ICO?
Nyora yako ICO nhasi pane yedu webhusaiti uye inosvika zviuru zvevatengesi kubva kumativi ese epasi uye zvakare, ikozvino isu tinopa iyo inokurumidza KYC sevhisi yeICO. Zadza fomu rekutaurirana nhasi uye isu tinosangana newe mumaawa makumi maviri nemana anotevera.